Ho avy ireo fanovana hanahaka ny 3D Touch | Vaovao IPhone
Ho avy ireo tweets hanahaka ny 3D Touch
Taorian'ny famoahana ny Jailbreak ho an'ny iOS 9 izay nitranga vao tsy ela akory izay nataon'ny ekipan'ny fampandrosoana Sinoa an'i Pangu, dia mahita bitsika marobe izay tsy mifanaraka amin'ny Jailbreak vaovao mihitsy isika noho ny antony mazava, tsy ho ela dia hanomboka i Cydia hikotrana amin'ny fanavaozana, koa amboary ny fitaovanao hiatrika fanafihana toa izany. Anisan'izany ny iray andrasan'ny mpampiasa iPhone maro dia ilay tweak malaza izay hanahaka ny 3D Touch an'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus. Hitanay fa ilay mpandraharaha izay miantso ny tenany hoe "Spookyninja" dia nilaza fa nahatratra ny marika.
Toa hitany ny fomba hanehoana ny menus concept an'ireo fampiharana izay mifanaraka amin'ny 3D Touch rehefa manindry mafy isika, raha ny marina, nizara pikantsary roa momba ny fomba fiasan'ilay tweak vaovao izy. Mba hanaovana an'io dia voalaza fa nampiasa fihetsika famantarana ilay izy, satria ho Activator. Noho izany, ireo mpampiasa dia tsy ho ela dia afaka manararaotra ny fiasan'ny 3D Touch, na farafaharatsiny mpisolo toerana azy.
Nampita tamin'ny alàlan'ny Twitter-ny izy fa miara-miasa amina mpandraharaha roa hafa izy amin'ny fandrafetana ilay tweak, izay ho hita tsy ho ela ao Cydia, ary mihevitra izahay fa tsy ho maimaim-poana izany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe, tena hahomby ve?, ary etsy ankilany, raha ny fanjifana bateria sy ny fahamarinan-toeran'ny rafitra no hahatonga ity fanovana ity ho mendrika, mazava ho azy fa manantena isika fa.
Na izany na tsy izany, amin'ny fotoana namoahana ireo fanavaozana 3D Touch maka tahaka an'i Cydia dia hampahafantatra anao toy ny fanavaozana ny iPhone foana izahay mba tsy hahavery antsipirihany anao fa tsy segondra. Ny tontolon'ny Jailbreak dia hihetsika tsy tapaka amin'ity andro ity, ary mampahatsiahy anao izahay fa afaka tapa-bolana dia manantena ny hankafy amin'ny fomba ofisialy ny iOS 9.1 amin'ny fitaovantsika izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Ho avy ireo tweets hanahaka ny 3D Touch
Efa misy ny tweak antsoina hoe Forcy izay maka tahaka ny 3D Touch, mbola somary maintso ihany izy nefa mandeha, afaka amin'ny valinteny BiggBoss
Reveal menio dia iray hafa, fotoana fohy, tonga ny tompon'ireo fitaovana tezitra vaovao
Nametraka ny Forcy aho omaly ary tsy manome olana izany